Edere site Tranquillus | August 29, 2018 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Ịchọta ọrụ ugbu a adịghị mfe mgbe niile. Ịchọta ọrụ n'ọhịa nke na-adọta anyị nwere ike ịbụ nsogbu. Ya mere, gịnị ma ịmepụta ọrụ gị n'ọhịa na-adọrọ anyị mma?
Kedu ebe ị ga-ahọrọ?
Nke mbụ, ọ dị mkpa ịmụta ihe ọ pụtara ịghọ ọrụ onwe onye. O doro anya na ezughị ezu ịghọ onye nwe gị iji nweta ego.
Ihe mbụ ị ga - eme adịghị mfe. You ga-enwerịrị ihe ịga nke ọma n’ịchọta mpaghara ga-eme ka ị chọọ iteta kwa ụtụtụ, wepụta oge na ya, mee ya ọrụ gị oge niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị hụrụ ese ihe osise, ị nwere ike ịchọ ịtụle ịbụ onye na-ese ihe, ma ọ bụ onye mmebe ihe osise Ọ bụrụ na ịchọrọ ide, ị nwere ike ịghọ onye edemede (blog, saịtị ụlọ ọrụ, akwụkwọ…). Enwere ọtụtụ nhọrọ, ya mere, ọ naghị adị mfe mgbe niile ịhọrọ otu mpaghara. Nwere ike dịka ọ dị mfe ịghọ onye ọrụ ọkpọ mmiri, ma ọ bụ onye nrụpụta weebụ, nhọrọ gị bụ nke gị! Mee nyocha dika aka gị si dị, chee echiche maka ihe ị ga - eme ma kwe omume dịka affinities gị si dị.
Ozugbo e debere ngalaba gị, ị ga-azụ onwe gị. Ịtụkwasị obi n'ihe ndị ọ rụzuru agaghị ezu iji mepụta ọrụ ya na ime ka ọ nwee ọganihu. Ya mere, gụọ akwụkwọ ndị ọrụ nhazi, ụgbọ oloko, na-aga ọmụmụ ihe, na-azụkwa ụgbọ okporo ígwè, na-agbanye n'ọhịa gị. Ya mere, ị ga na-arụ ọrụ oge niile na ngwaọrụ, nkà, na ahịa kwekọrọ na ọrụ gị.
Ya mere, ị ghaghị:
Nyochaa ikike nke ọrụ gị
Họrọ ụdị iwu gị (autoentrepreneur or company)
Mepụta azụmahịa gị
Enwere m njikere ịhapụ onwe m?
Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụba uru na ọghọm ndị na-echere gị site na ịghọ onye nwe gị. Mmalite nke ọrụ na-achọ oge nkwụnye ego, nghazi omume iji merie ọdịda na nkwenye na-ekwe omume, na ọkwa ego ma ọ bụrụ na ọrụ gị chọrọ itinye ego ma ọ bụ mgbazinye nke ogige dịka ọmụmaatụ. Ịghọ onye nwe gị apụtaghị ịme ego n'enweghị inye onwe gị ikike.
Ị ga-arụzu ọtụtụ ihe aga-eme ga-ewe oge ma ga - eme n'otu oge ahụ dịka nkwekọrịta mbụ gị. Lee ụfọdụ ihe atụ:
Chọta ma zụlite ndị ahịa gị
Debe ọrụ / nkwekọrịta ya.
Mepee ụlọ ahịa, dozie ngwá ọrụ ahụ.
Gwa ndị ahịa gị.
Mee iwu / kwenye.
Kpọsaa ego gị.
Dezie n'usoro n'ọnọdụ niile.
Debe ihe mgbaru ọsọ gị.
Buru anya na ego a ga - enweta ma ọ bụrụ na ị nweta ego ha ga - akwụ.
Isi ihe dị mkpa ịghara ileghara bụ iwu ndị gbara gị gburugburu iwu. Dịka onye ọrụ onwe gị, ị nwere ike ịghọ onyeisi ụlọọrụ ma ọ bụ onye na-azụ ahịa. Ya mere, jiri nlezianya nyochaa tupu ị họrọ ịhọrọ ka ọ bụrụ ihe kachasị mma maka ọrụ gị.
Mepụta ọrụ gị, ọtụtụ uru
Mmalite ga-esi ike, ma ịghọ onye nwe ya bara uru. Enwere uru dị ukwuu n'ịmalite ụdị ọrụ a.
Ị na-eme ahia ị na-achọ.
Ị ga-enwe mgbanwe, ị na-ahazi oge gị.
Ị ga - emecha nweta ego.
Ị na-ahazi nhazi gị n'etiti ọrụ gị na ndụ gị.
Ị nwere ike iji nkà gị rụọ ọrụ dị iche iche ma nweta ndị ọhụrụ.
GỤỌ Ozi banyere onwe gị: ihe niile ịchọrọ ịma
Ọrụ a na-arụ site n'ịchọsi ike ga-abụ ọrụ dị irè
Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ọchịchọ, nhọrọ ịhọrọ, na mkpa ịkwado onwe gị, amalite. Mụta ihe ndị ị ga-eme tupu ịmalite ịmepụta ọrụ gị kachasị mma site na nzọụkwụ!
Kedu otu esi emepụta ọrụ gị ma bụrụ onye onwe gị? August 29th, 2018Tranquillus
gara agaMụta otu esi etinye ihe ọmụma, ndụmọdụ niile iji nweta ya
-esonụỤlọ Ọrụ Ọzụzụ G Suite
Ihe Need Kwesịrị Knowmara Banyere Nkeonwe
Kedu ihe dị iche n'etiti ụgwọ ọnwa na nnukwu ụgwọ ọnwa?